स्वास्थ्य भुलेर पनि नखानुस् भटमास यस्ता व्यक्तिले, हुनसक्छ नसोचेको असर
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: बढ्दो व्यस्तताका कारण आजभोलि हामीले खानेकुरामा खासै ख्याल दिएका हुँदैनौं । कतिपय खानेकुरा हाम्रा लागि अमृत बराबर हुन्छन् भने कतिले हामीलाई असर गरिरहेका हुन्छन् ।
कति व्यक्तिले त आफूलाई मन परेको खान जस्तो अवस्थामा पनि छोड्दैनन् । चाहे बिरामी भएका बेलामा किन नहोस् ।
त्यसो त भटमास स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यसलाई प्रोटिनको स्रोत पनि मानिन्छ । भटमासमा पाइने भीटामिन ए ले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । शरीरलाई फिट राख्न पनि भटमास उत्तिकै लाभदायक हुन्छ ।
किनकि, भटमासले एमिनो एसिड उत्पादन गर्छ ।
शारीरिक व्यायाम गर्ने या स्वास्थ्यलाई तत्व चाहिने व्यक्तिलाई यो निकै लाभदायक हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा भने भटमास सेवन गर्नु हानीकारक हुन्छ ।
केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको एक शोधका अनुसार केही रोगका बिरामीले भटमास खानु विष खानु बराबर हो ।
भटमास हुने ट्रान्स फ्याटले कोलेस्ट्रोल र मुटुको रोग निम्त्याउने सम्भावना हुने विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । मुटुका रोगीले भटमास सेवन गर्नु हानीकारक हुन्छ ।
सुत्केरीले भटमास खाँदा समस्या
सुत्केरी महिला र स्तन पान गराइरहेकी महिलाले पनि भटमास खानु हानीकारक हुने देखिएको छ । भटमासमा हुने एमिनो एसिडले गर्भवर्ती महिलालाई रिंगटा लाग्ने, चक्कर आउने जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, आमाले स्तनपान गराउँदा भटमास खाएमा त्यसले बच्चामा अपच हुने समस्या हुन्छ ।
यस्तै छालासम्बन्धी कुनै रोग छ या तपाईंको छाला चिलाउने समस्या छ भने भटमासको सेवन नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
यदि कसैलाई मुत्राशयको क्यान्सर छ भने उनीहरूले भटमास नखानु धेरै राम्रो हुन्छ । यदि अघिल्लो पुस्तालाई क्यान्सर थियो भने पनि पछिल्लो पुस्ताले नै भटमास नखानु राम्रो हुन्छ ।
भटमासमा पाइने फीटोएस्ट्रोजन नामक एक केमिकल सामान्य व्यक्तिलाई त्यति असर गर्दैन तर मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडितका लागि भने यो विषजस्तै हुन्छ । त्यसैले भुलेर पनि भटमास नखानुस् ।
चिनी रोग (मधुमेह) का बिरामीले पनि भटमास सेवन गर्नुहुँदैन । भटमासको सेवनबाट रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न जान्छ । र, स्वास्थ्यमा थप समस्या आउँछ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ अनुुुसन्धानअनुसार सार्स–कोभ–२ चिसो स्याल्मन माछामा एक सातासम्म बाँच्नसक्छ र सायद, संक्रामक पनि हुनसक्छ । यसबारे धेरै प्रश्नको जवाफ भने अनुत्तरित छ । जस्तो – के माछा पकाउँदा भाइरस मर्छ ? स्याल्मन माछामा मात्रै भाइरस यति लामो समय रहन्छ वा अन्य माछा पनि रहन्छ ? यी प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म फ्रोजन फुडको सुरक्षा पाटो अस्पष्ट नै रहने जनस्वास्थ सम्बन्धी पोर्टल हेल्थ सट्स डटकमले जनाएको छ ।